अनुष्काले पहिलो भ्यालेनटाइन विराटसँग मनाउन नपाउने ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment Bollywood अनुष्काले पहिलो भ्यालेनटाइन विराटसँग मनाउन नपाउने ?
बलिउडका चर्चित नायिका अनुष्का शर्मा पछिल्लो समय विवाहको कारण निकै चर्चामा आए । उनले केही समय फिल्मबाट बिवाहका लागि विश्राम लिइन् । टिम इन्डियाका कप्तान विराट कोहलीलाई औपचारिक श्रीमान् बनाएका अनुष्कको हनिमुन अवधी पनि सकिएको बुझिएको छ । अब उनी पुन फिल्मी लयमा फर्कने सुरसारमा छन् ।
त्यही फिल्मको कारणले उनी नव दुलहासँग पहिलो भ्यालेनटाइन मनाउनबाट बञ्चित हुँदैछिन् । किनभने उनको नयाँ फिल्म भ्यालेनटाइन डेमा छायांकन हुँदैछ । फिल्मको नाम हो, सुई धागा । यो मेड इन इन्डियामा आधारित रहेको बताईएको छ ।
फिल्म खासमा स्वदेशी उद्यमलाई बढाव दिने खालको छ । यद्यपी यसको कथा निकै रोचक रहेको र त्यसमा प्रेमकथा पनि रहेको वताइन्छ । फिल्ममा वरुण धवनले एक दर्जीको भूमिका खेल्दैछन् । तर, अनुष्काको भूमिकाबारे भने अझै खुलाइएको छैन । राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता टीम निर्देशक शरत कटारिया र निर्माता मनीष शार्माको फिल्म सुई धागा–मेड इन इन्डिया आगमी २८ अक्टुबरमा रिलिज हुने जनाईएको छ ।